Esona sicwangciso siBalaseleyo se-imeyile sokuSebenza ngaphakathi Martech Zone
NgeCawa, ngoFebruwari 21, 2016 NgoMvulo, Februwari 22, 2016 Douglas Karr
My ipodcast yentengiso Umntu endisebenza naye, u-Erin Spark, uyathanda ukundinika ixesha elinzima malunga nesicwangciso sethu sokungena kwi Martech Zone. Ngaphambi kokuba sithethe malunga nento esiyivavanyileyo kunye nento esebenzayo, kufanelekile ukuba ndichaze ukubaluleka kwe-imeyile. Ukuba ujonge ukupapashwa kwi-Intanethi njengomatshini, ukufaka iidilesi ze-imeyile kukude Eyona ndlela isebenzayo zokubuyisa iindwendwe ezifanelekileyo kwindawo yakho.
Ngapha koko, ndiza kuhamba ndiye kuthi uluhlu lweedilesi zakho ze-imeyile sesona sicwangciso sibaluleke kakhulu nesisandi kwindawo yakho. Kungenxa yoko le nto sakhe i inkonzo ye-imeyile yeWordPress. Isiseko sababhalisi esikhulayo kwindawo yakho yile eyona metric yokuqonda impilo kunye nokuzibandakanya komxholo wakho. Xa undwendwe lubhalisile kwaye lukungenisa kwibhokisi engenayo (ekunokwenzeka ukuba sele igcwele), oko kuthetha ukuba bayalithemba ixabiso eliziswa ngumbutho wakho.
Ukwazisa ngeMatriki yokwamkela
Sivavanye itoni yezixhobo ezahlukeneyo ukuzama bamba iidilesi ze-imeyile zabakhenkethi Kwincwadana yethu-kodwa ukuza kuthi ga ngoku, inye kuphela esebenze kakuhle. Ngokuqinisekileyo, sifumana ukukhohlisa kweedilesi ze-imeyile apha naphaya ngezixhobo esizisebenzisayo. Kwaye ngokunyanisekileyo siyaziphepha iindlela zokurhwebesha iindwendwe ukuba zibhalise njengee-sweepstake kunye noonikezo. Sifuna ababhalisile bokwenyani ababhalisileyo kuba bayaliqonda ixabiso esibazisela lona. Incwadana yethu ihlala inikezela ngemixholo eyahlukeneyo yentengiso kunye neengcali zentengiso kuphando, ukufumanisa kunye nokufunda ukusebenzisa itekhnoloji yentengiso ukuphucula iziphumo zeshishini.
A wamkelekile mat Isakhelo esipheleleyo sephepha esibonakala kubatyeleli abatsha, sityhala isiza ezantsi kwiphepha, kwaye sicela umtyeleli ukuba abhalise. Kwindawo yethu, kubonakala ngathi:
Ayisebenzi nje, isebenza ngokumangalisayo. Ngelixa ezinye izicwangciso zinokusifumanela ababhalisi abali-XNUMX ngenyanga, i-Welcome Mat yethu isenzela ababhalisi abambalwa yinke imihla. Ngapha koko, ngolunye usuku saba nababhalisile abangaphezu kwe-100. I-Mat yethu yokwamkela iguqula ngaphezulu kwamaxesha e-100 ngcono kunaso nasiphi na esinye isicwangciso esisetyenzisileyo.
Ngokungafaniyo ne-popup ephazamisa umntu emva kokuba eqale ukufunda, le ndlela ibacela ukuba babhalise ngaphambi kokuba baqalise. Ukuba abanqweneli ukwenza njalo, bathi hayi okanye baskrole ezantsi iphepha. Iqonga likwasinika ithuba lokulibazisa ukubonisa ukungena kwakhona. Kwaye sinokuvavanya iinguqulelo ezahlukeneyo kunye nesixhobo sezixhobo eziphuculweyo ukubona ukuba enye isebenza ngcono kunenye.
Khulisa iWebhusayithi yakho ngokuKhokelela kwiSumoMe
The Wamkelekile Mat sisixhobo esinye esisebenzayo kunye nesisebenzayo sokukhulisa amaxabiso okuguqula iwebhusayithi yakho. SumoMe izixhobo zendlela ngoku zifakiwe kwaye zilungiselelwe kwiiwebhusayithi ezingaphezu kwama-200,000! Kwaye okona kubaluleke kakhulu-iqonga libonelela ngaphezulu kweshumi elinambini lezixhobo zokukunceda uqhube uguquko kwaye wandise ukusebenza kwendawo yakho.
Ukuba usebenzisa indawo yeWordPress, iSumoMe ikwabonelela ngePlagi yeWordPress ukuze uqalise ngokulula. I-SumoMe ikwanayo neplagi ye-Chrome, eyenza ukufikelela kwisixhobo sayo kube lula njengokucofa iqhosha. Eyona nto ibaluleke kakhulu kubo, bahlala besongeza iindlela ezintsha zokukhulisa uluhlu lwakho lwe-imeyile, ukukhuthaza ukwabelana ngokwasentlalweni, kunye nokulinganisa ukusebenza kwendawo yakho kubahlalutyi izixhobo.
Sisebenzisane neSumoMe ukuze uqalise-sayina ngoku ukufikelela kwizixhobo ezilishumi elinambini akukho ndleko!
Zama uSumoMe SIMAHLA!
UDean Oakes (@deanoakes91)
Umsebenzi omhle Douglas. Ndicofe ikhonkco ku-Twitter kwaye ngokuqinisekileyo ndabuliswa yi-mat eyamkelekileyo oye wabhala ngayo. Ayingeni endleleni yomxholo endilapho ukuze ndiwubone kodwa isabonakala kakhulu.
Khange ndiyifake nyani idilesi yam ye-imeyile, kodwa mhlawumbi uzondifumana kwixesha elizayo 😉
Ngaba uvavanye i-A/B isikrini sokubanjwa esikhokelayo esibonakala xa umsebenzisi ESHIYA iwebhusayithi? (isikrini esigcweleyo esifana ne "Welcome Mat" iya kuba yi "Bye-bye Mat" umzekelo 😉 )
Kuba andiboni ukuba kutheni umsebenzisi, efika kwiwebhusayithi yakho ixesha loku-1 ukufunda isithuba, angabeka emngciphekweni “wokuphulukana” nethuba lokufunda eso sithuba ngokunika idilesi ye-imeyile kwangoko (kwaye anokuthunyelwa kwenye indawo. iphepha) ngaphandle kokufunda kuqala iposti ngokwayo ukuze wazi ukuba umgangatho wayo ufanelekile na ukushiya idilesi ye-imeyile…
Ukuba wenze uvavanyo lwe-A / B ngaphambili, uchaza njani ukuba abantu banokuvuma ngakumbi ukushiya idilesi ye-imeyile yabo ngaphambi kokuba bafunde umxholo wakho endaweni yokuba bafunde umxholo wakho?
Unika umdla, uToni. Andiyoncutshe kuyilo lwewebhu nangayiphi na indlela. Unokwenza njani malunga nokuphumeza oko ukuba bayayishiya indawo? Nge pop-up xa becofa "x" ?
Hey Dean, iqhinga elisetyenziswayo kuthiwa injongo yokuphuma, siskripthi esibona isantya sesalathisi se mouse kunye nesalathiso. Njengoko umntu etyhala imouse ngakwibha yedilesi okanye iqhosha elingasemva, kuvela ipopup.